Mpanamboatra santionany PCB Assembly - Mpamatsy santionany Sampan-draharaha PCB ao Shina
Mba hahazoana antoka fa ny vokatra elektronika vaovao dia tonga lafatra alohan'ny handefasana amin'ny tsena dia mila hizaha toetra ny prototypes alohan'ny famokarana betsaka. Ny firafitra PCB sy ny fivorian'ny PCB dia dingana ilaina amin'ny famokarana prototype turnkey PCB. Ny fivoriambe PCB prototype dia ampiasaina amin'ny fanandramana miasa, noho izany ny injeniera dia mety hamolavola drafitra tsara sy hamahana bibikely sasany. Indraindray mety mila in-2-3 izy io, ary mahita mpanamboatra fivarotana elektronika azo antoka dia zava-dehibe.
Ao amin'ny PCBFuture, izahay dia mandray dingana intrinsika hiantohana fa mifanaraka amin'ny kalitaon'ny asanay ary mihoatra ny andrasan'ny mpanjifanay. Ny ekipanay dia mampiasa ny farany amin'ny teknolojia PCB sy ny fitaovana hihaonana amin'ny fangatahana kalitao. Izahay dia manolo-tena amin'ny fanomezana vokatra sy serivisy avo lenta izay nanampy anay hahazo ny fahatokisana sy ny fanajana ny mpanjifanay.
PCB malefaka, fantatra koa amin'ny anarana elektronika malefaka, tabilao mihodina, Flex PCB, fantsom-pifandraisana, dia karazana fivorian'ny elektronika amin'ny alàlan'ny fametrahana fitaovana elektronika amin'ny substrate plastika malefaka toy ny polyimide, PEEK na film polyester conductive mangarahara. Ho fanampin'izany, ny boribory faribolana dia mety ho faribolana volafotsy vita pirinty amin'ny polyester.
Ny fahaizantsika PCB Assembly dia manome ny mpanjifanay ny fanamorana ny "One Stop PCB Solution" ho an'ny fanamboarana PCB sy ny filan'ny Assembly. Ny fahaizanay dia misy ny Surface Mount (SMT), Thru-hole, Mixed Technology (SMT & Thru-hole), Single na Double Sided Placed, Fine Pitch Components, sy maro hafa.
PCBFuture dia manolo-tena hanome famokarana kalitao avo lenta sy ara-toekarena ary serivisy fivoriambe PCB iray mijanona ho an'ny mpanjifa manerantany. Manomboka amin'ny prototyping haingana, fampifangaroana avo lenta ka hatramin'ny famokarana avo lenta, dia tadidinay foana fa ny kalitao ambony, amin'ny fandefasana ara-potoana, ny vidin'ny fifaninanana ary ny serivisy tsy mandeha amin'ny laoniny no hany fomba hahazoana ny fahatokianao. Io dia ahafahanao, ilay mpanjifa hajaina, hifantoka amin'ny orinasanao ifotony antoka fa azo antoka fa eo am-pelatanana sy azo antoka ny filanao.
PCBFuture dia mifantoka amin'ny mpanjifa tolotra misy serivisy fanamboarana PCB haingana kalitao sy serivisy fanaterana haingana sy ara-potoana. Raha manana fepetra takiana amin'ny famokarana PCB haingana ianao dia safidinao tsara. Afaka mahazo izay ilainao amin'ny resaka hafainganana, fahombiazana, kalitao ary vidiny eto ianao.
PCBFuture dia orinasa mpanamboatra fifanarahana elektronika voalohany voamarina, manome PCB Assembly, PCB fabrication, ary serivisy turnkey PCB. Ny fitaovantsika, ny rafitra ary ny fizotrantsika dia nohamarinina mba hahay hamolavola amin'ny fananganana vokatra sarotra izay manana takiana antonony / avo mifangaro. PCBFuture dia tsara amin'ny fanomezana kalitao Printed Circuit Design sy Turnkey prototype ary vahaolana famokarana ho an'ny vondron'olona elektronika.
Serivisy fivorian'ny Electronics Smart Controller
Pr Assembly Circuit Board Assembly, fantatra amin'ny anarana hoe PCBA, no dingan'ny fametrahana fitaovana elektronika isan-karazany amin'ny PCB. Ny board circuit alohan'ny fanangonana ireo singa elektronika dia antsoina hoe PCB. Aorian'ny fametahana ireo singa elektronika, dia antsoina hoe fivorian'ny birao vita pirinty (PCBA) ny solaitrabe. Ny dian-tongotra na ny lalana conductive voasokitra ao amin'ny ravina varahina laminated PCB dia ampiasaina ao anaty substrate tsy mitarika mba hamoronana ilay fiangonana. Ny fametahana ireo singa elektronika miaraka amin'ny PCB dia ny hetsika famaranana alohan'ny hampiasana ny fitaovana elektronika miasa tanteraka.